खेलकुद | suryakhabar.com | Page 104
यसरी गरियो खेलाडीलाई ट्राफिक सचेतना
on: June 19, 2017 In: खेलकुदTags: यसरी गरियो खेलाडीलाई ट्राफिक सचेतनाNo Comments
काठमाडौं । नेपाल जुडो संघले ओलम्पिक दिवसका अवसरमा ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । कार्यक्रमको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरे । सो अवसरमा ज...	Read more
चिलीको विजय सुरुवात
on: June 19, 2017 In: खेलकुदTags: चिलीको विजय सुरुवातNo Comments
एजेन्सी । रुसमा भइरहेको फिफा कनफेडेरेशन कप फुटबलमा चिलीले विजयी सुरुवात गरेको छ । प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा क्यामरुनलाई २–० ले हराएर चिलीले विजयी सुरुवात गरेको हो । समूह ‘ब...	Read more
यसकारण एक्कासि चम्कियो विराट कोहलीको भाग्य
on: June 18, 2017 In: खेलकुदTags: यसकारण एक्कासि चम्कियो विराट कोहलीको भाग्यNo Comments
एजेन्सी । भारतीय कप्तान विराट कोहलीको भाग्य अहिले चम्किएको छ। उनले कुनै चिज छोए सुन बन्ने अवस्थामा छ। यसैले होला, अहिले उनलाई प्रायोजन गर्न प्रायोजकहरुको भीड लाग्ने गरेको छ। कोहलीले भर्खरै ट...	Read more
अब कहाँ जालान् रोनाल्डो ?
on: June 17, 2017 In: खेलकुदTags: अब कहाँ जालान् रोनाल्डो ?No Comments
एजेन्सी । रियल मड्रिडका स्ट्राइकर क्रिष्टियानो रोनाल्डोले आफूमाथि लागेको कर छलीको आरोपबाट निराश रहेको र यसैकारण उनले क्लब छोड्न चाहेको उनका नजिकका साथीलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यम ख...	Read more
च्याम्पियन्स ट्रफि क्रिकेट: बंगलादेश ९ विकेटले पराजित
on: June 16, 2017 In: खेलकुदTags: च्याम्पियन्स ट्रफि क्रिकेट: बंगलादेश ९ विकेटले पराजितNo Comments
एजेन्सी । च्याम्पियन्स ट्रफि क्रिकेटको उपाधिका लागि भारत र पाकिस्तान खेल्ने भएका छन् । बंगलादेशलाई ९ विकेटले हराउँदै भारतले पाकिस्तानसँगको फाइनल पक्का गरेको हो । बंगलादेशले दिएको २ सय ६५ रन...	Read more
पाकिस्तान च्याम्पियन्स ट्रफी क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा
on: June 15, 2017 In: खेलकुदTags: पाकिस्तान च्याम्पियन्स ट्रफी क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमाNo Comments
एजेन्सी । पाकिस्तान च्याम्पियन्स ट्रफी क्रिकेटको फाइनल पुगेको छ । बुधबार राति सकिएको प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनलमा इंग्ल्याण्डलाई ८ विकेटले हराउँदै पाकिस्तानले फाइनलमा स्थान बनाएको हो ।	Read more
यसरी एक्कासि विवादमा तानियो एसियन प्रिमियर लिग !
on: June 13, 2017 In: खेलकुदTags: यसरी एक्कासि विवादमा तानियो एसियन प्रिमियर लिग !No Comments
काठमाण्डौ । नेपालमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको एसियन प्रिमियर लिग (एपिएल) टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु नहुँदै विवादमा तानिएको छ। भारतको चण्डीगढस्थित अल्टिमेट स्पोर्टस् म्यानेजमेन्टको आयोजन...	Read more
फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि नाडालको हातमा
on: June 12, 2017 In: खेलकुदTags: फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि नाडालको हातमाNo Comments
एजेन्सी । फ्रेन्च ओपन टेनिसको उपाधि विश्व नम्बर चार राफायल नाडालले जितेका छन् । पेरिसमा शनिबार राति भएको फाइनलमा विश्व नम्बर तीन स्टानिसलास वावरिन्कालाई हराएर नाडालले १० औं पटक फ्रेन्च ओपन ट...	Read more
on: June 11, 2017 In: खेलकुदTags: जर्मनीको सानदार जितNo Comments
एजेन्सी । विश्वकप २०१८ को छनौट अन्तर्गत शनिबार राति भएको खेलमा जर्मनीले शानदार जित दर्ता गरेको छ । युरोपियन क्षेत्रको छनौट अन्तर्गत समूह ‘सी’ मा रहेको विश्व विजेता जर्मनीले सान मारिनोलाई ७–०...	Read more
नेपाली फुटबल टोली किन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धामा खरो रुपमा उत्रिन सक्दैन ? यस्तो छ कारण !
on: June 10, 2017 In: खेलकुदTags: नेपाली फुटबल टोली किन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धामा खरो रुपमा उत्रिन सक्दैन ? यस्तो छ कारण !No Comments
काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय टोली मैदानमा उत्रदा नेपाली दर्शक जति उत्साहित हुन्छन् खेलको नतिजाबाट उत्तिकै निराश पनि । भर्खरै नेपालले भारतसँग अन्तराष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्यो, नतिजा फेरी...	Read more
श्रीलंकाद्वारा भारत पराजित
on: June 09, 2017 In: खेलकुदTags: श्रीलंकाद्वारा भारत पराजितNo Comments
एजेन्सी । च्याम्पियन्स ट्रफि क्रिकेटमा श्रीलंकाले भारतलाई ७ विकेटले हराएको छ । ३ सय २२ रनको लक्ष्य श्रीलंकाले ३ विकेट जाँदा ८ बल बाँकी छँदै भेट्टाएको हो । श्रीलंकाको जीतसंगै यो समूह ‘बी’बाट...	Read more
पाकिस्तानले दक्षिण अफ्रिकालाई हरायो
on: June 08, 2017 In: खेलकुदTags: पाकिस्तानले दक्षिण अफ्रिकालाई हरायोNo Comments
एजेन्सी । च्याम्पियन्स ट्रफि क्रिकेटमा पाकिस्तानले दक्षिण अफ्रिकालाई १९ रनले हराएको छ । वर्षाले प्रभावित खेलमा डकवर्थ लुइस नियम अनुसार पाकिस्तान १९ रनले विजयी भएको हो । पानी पर्नुअघि पाकिस्त...	Read more
संसारकै महंगो खेलाडी क्रिस्ट्यानो रोनाल्डोको यसरी भए सफल
on: June 07, 2017 In: खेलकुदTags: संसारकै महंगो खेलाडी क्रिस्ट्यानो रोनाल्डोको यसरी भए सफलNo Comments
काठमाण्डौ । रोनाल्डोको जन्म (५ फेब्ररी १९८५) माडैरा, पोर्चुगलमा भएको थियो । उनको जन्म एक गरिब सन्तानको कोखबाट भएको थियो । उनको बुबा मालीको रुपमा काम गर्थे भने आमा अरुको घरमा खाना पकाएर कमाउन...	Read more
क्रिष्टियानो रोनाल्डोका छोरा जब बाबुलाई देख्ने वित्तक्कै रोए….!
on: June 06, 2017 In: खेलकुदTags: क्रिष्टियानो रोनाल्डोका छोरा जब बाबुलाई देख्ने वित्तक्कै रोए....!No Comments
एजेन्सी । बुबाले च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा रियल म्यार्डिडलाई जित दिलाउन सफल भएपछि क्रिष्टियानो रोनाल्डाको छोरा एक्कासि रोएका छन् । च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा आफ्नो बुबाले २ गोल हानेपछि भावु...	Read more
पारस खड्का लगायतका खेलाडीलाई सशस्त्रले हटायो
on: June 05, 2017 In: खेलकुदTags: पारस खड्का लगायतका खेलाडीलाई सशस्त्रले हटायोNo Comments
काठमाण्डौ । तलब दिन नसकेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले ५० खेलाडी तथा प्रशिक्षकको करार सम्झौता रद्द गरेको छ। खेलकुद कोष रित्तिएपछि वैशाखदेखि नै सशस्त्र प्रहरीले सबै करार खेलाडी र प्रशिक्षकको सम्झौता...	Read more
रियल म्यार्डिलले बनायो विश्व फुटबल जगतमा नयाँ रेकर्ड
on: June 04, 2017 In: खेलकुदTags: रियल म्यार्डिलले बनायो विश्व फुटबल जगतमा नयाँ रेकर्डNo Comments
एजेन्सी । सबैभन्दा धेरै पटक प्रतियोगिता जितेको रियल म्यार्डिडले शनिबार राती कार्डिफमा भएको फाइनलमा युभेन्टसलाई ४–१ गोल अन्तरले हराउँदै एतिहासि रेकर्ड कायम गरेको छ । म्यार्डिड प्रतियोगिताको द...	Read more
नोभाक जोकोविच फ्रेन्च ओपन टेनिसको चौथो चरणमा प्रवेश
on: June 03, 2017 In: खेलकुदTags: नोभाक जोकोविच फ्रेन्च ओपन टेनिसको चौथो चरणमा प्रवेशNo Comments
एजेन्सी । नोभाक जोकोविच फ्रेन्च ओपन टेनिसको चौथो चरणमा प्रवेश गरेका छन् । तेस्रो चरणमा बिना बरियताका अर्जेन्टिनाइनी डिएगो श्वार्ट्ज्म्यानलाई हराउँदै जोकोविचले चौथो चरणमा स्थान बनाएका हुन् ।	Read more
फिफा वरियतामा नेपालले राख्यो इज्जत
on: June 02, 2017 In: खेलकुदTags: फिफा वरियतामा नेपालले राख्यो इज्जतNo Comments
काठमाण्डौ । विश्व फुटबल जगतको प्रतिस्पर्धामा नेपालले चार स्थानमा सुधार गरेको छ । फिफाले बिहीबार सार्वजसनक गरेको वरियताअनुसार नेपाल ४ स्थानमा सुधार गर्दै १ सय ६९ स्थानमा उक्लिएको हो ।	Read more
रियल मर्डिडलाई उपाधि जित्ने मौका
on: June 01, 2017 In: खेलकुदTags: रियल मर्डिडलाई उपाधि जित्ने मौकाNo Comments
एजेन्सी । च्याम्पियनसिप लिग फुटबल अन्तर्गतको फाइनल आउँदो शनिबार वेल्सको कार्डिफमा हुँने भएको छ । फाइनलमा घरेलु लिगको उपाधि जितेका रियल मर्डिड र युभेन्टस् प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भएका छन् । रि...	Read more
सिन क्योकुसिन टोली सिंगापुर जाने
on: May 31, 2017 In: खेलकुदTags: No Comments
काठमाण्डौ । पाँचौं सिंगापुर फुल कन्ट्याक्ट कराते च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन ५ सदस्यीय डब्लुकेओ नेपाल सिन क्योकुसिन कराते टोली बिहीबार सिंगापुर प्रस्थान गर्ने भएको छ । जुन ३ मा हुने प्रतियोगि...	Read more